Baraha Bulshada Ma Dilayaan Sumaddaada? | Martech Zone
Warbaahinta Bulshada Ma Dilaysaa Sumaddaada?
Khamiis, Juun 14, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan xoogaa ku jiraa xayndaabka ku saabsan sawir-gacmeedkan Suuqgeynta Hantida. Ku dilo sumad, runti waxaad ubaahantahay inaad waxyeello gaarto mana hubo in shaxdan runta ah ay dhab ka tahay taas. In kasta oo ay qaadato aragti rajo xumo ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada, dilku waa xoogaa buun-buunin ah. Sidee baraha bulshada u noqon kartaa dhaawacaya sumaddaada wuxuu noqon karaa cinwaan aad ufiican.
Suuqgeynta warbaahinta bulshada waa mowduuc aad looga dooday. Runtii ma u qalantaa waqtigaaga? Miyey kaa caawineysaa ama dhaawaceysaa saameyntaada? Kumaa yaa runtii bartilmaameedsanaya: macaamiisha cusub, macaamiisha jira, wada-hawlgalayaasha ganacsi ee suurtogalka ah, ama qof kale oo gebi ahaanba ah? Ka jawaab dhammaan su'aalahan qabow, xaqiiqooyin adag.
Sidoo kale, falanqaynta la bixiyay waa jeex oo ma tixgelinayso diyaarinta iyo ilaha shirkadaha ay ku sameeyeen istiraatiijiyadooda warbaahinta bulshada. Waxaan rajeynayaa in shirkadaha ay barteen casharkooda oo aysan kaliya ku boodin warbaahinta bulshada iyaga oo aan dhisin istiraatiijiyad wanaagsan oo gudaha ah (iyo sidoo kale istiraatiijiyad ay kula xiriiraan oo ay u dejiyaan waxyaabaha laga filayo shaqaalaha). Maaha wax macquul ah in aan arki doonno sumado la dilay killed laakiin waxaan aragnaa noocyo badan oo waxyeello aan loo baahnayn la kulanto maxaa yeelay iyagu ma aysan diyaarin!
Tags: brandwarbaahinta bulshada
10 Amarada Pinterest ee Ganacsiga
Imtixaanka Xayeysiiska ee Facebook, otomatiga iyo Warbixinta